रोमको प्रकोप | यात्रा समाचार
मरियम | | के हेर्ने, रोम
छवि | सिविटाटिस
पश्चिमी सभ्यताको पालनाको बारेमा सोच्दै रोमको सोच्न, यसको सातवटा पहाडहरू, यसको भव्य वास्तुकलामा, जसले यसको महान् विगतको साक्षी दिन्छ पुरातनताको सबैभन्दा ठूलो साम्राज्य मध्ये एक को राजधानी को रूप मा। र पक्कै पनि यो भ्याटिकन स्क्वायरबाट कुट्ने क्रिश्चियनको हृदय महसुस गर्नु हो।
यसको लामो इतिहासको कारण, रोममा त्यहाँ भेट्टाउने धेरै छ। यसको उत्पत्ति अज्ञात छ यद्यपि धेरैले यसलाई ईसापूर्व 754 XNUMX took मा भएको हो भन्ने सुझाव दिए पछि त्यस शहरले इटालीको इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरू देखेको छ, जस्तै राजतन्त्र, गणतन्त्र वा साम्राज्य र ती सबैले चाखलाग्दो किस्सेलाई जन्म दियो। र कथाहरू, जसको एक राम्रो अंश रोममा एक वा अर्को तरिकामा रहन्छ।
रोमको बिरामीहरूको मामला त्यस्तै हो, भूमिगत ग्यालरीहरू जुन शताब्दीयौंसम्म चिहानको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। विगतमा त्यहाँ si० भन्दा बढी catacombs थिए तर तिनीहरूमध्ये केवल जना हामीसँग उनीहरूलाई भेट्न राम्रो अवस्थामा पुगेका थिए।
अर्को पोस्टमा, हामी रोमको प्रकोपबाट सम्पर्क गर्नेछौं यसको मूल, यसको अन्त, यसको विशेषताहरू र अधिक जान्नको लागि। यो नछुटाउ!
1 रोमका प्रलयहरू के हुन्?
2 रोमको catacombs को उत्पत्ति
3 रोमको Catacombs
4 सजावट र catacombs को आइकनोग्राफी
5 रोमको प्रकोपमा के हेर्ने?
6 रोमको catacombs मा टिकटको मूल्य
रोमका प्रलयहरू के हुन्?
छवि | नेटभिस
यी भूमिगत ग्यालरीहरू हुन् जसलाई रोमका प्रारम्भिक इसाईहरू र यहूदी र रोमी नागरिकहरूले चिहानको रूपमा प्रयोग गरेका थिए।
रोमीहरूका लागि मृतकको लास जलाउने परम्परा थियो तर क्रिश्चियनहरू यस चलनसँग सहमत भएनन् त्यसैले उनीहरूले यी विशाल भूमिगत कब्रिस्तानहरू बनाउने निर्णय गरे तिनीहरूलाई क्रिश्चियन रीति अनुसार दफन गर्न र ठाउँको अभाव र जमिनको उच्च लागतको समस्याहरू समाधान गर्ने एउटा तरिकाको रूपमा जसले उनीहरूको अन्त्येष्टिमा भेट्टाउन सक्थे।
त्यस समयको रोमन कानूनले मृतकहरूलाई शहर भित्र गाड्न अनुमति दिँदैन, त्यसैले यी समुदायहरूले यसको भित्ता बाहिर रोमको प्रलय पत्ता लगाउनुपर्थ्यो। प्राथमिकतामा सुनसान ठाउँमा र लुकाइएको भूमिगत रूपमा इसाई अन्त्येष्टि विधिहरू स्वतन्त्र रूपमा र कुनै पनि उत्पीडन महसुस नगरीकन गर्न सक्षम हुन।
पहिलो प्रकोप रोमको बाहिरी इलाकामा बनाइएको जमिनमा हुन्थ्यो। यस तरिकाले, क्याटाकम्ब शब्दको अर्थ "खानीको छेउमा" हो। रोमको प्रकोपमा अनगन्ती भूमिगत ग्यालरीहरू थिए जुन धेरै किलोमिटर लम्बाइको चक्रव्यूह गठन गर्न सक्दछ, जुनसँगै आयताकार कोठाको बहु प multiple्क्ति उत्खनन गरिएको थियो।
मृतकका शवहरू पानामा बेर्दथे र तिनीहरूको अनन्त आरामका लागि टाढामा राखिएका थिए। त्यस पछि, तिनीहरू माटोका चिहानहरू र कम सामान्यतया संगमरमरको चिहानको साथ बन्द थिए। अन्तमा, मृतकको नाम आवरणमा ईसाई प्रतीकको साथ कोरिएको थियो।
रोमको catacombs को उत्पत्ति
छवि | उत्तम पर्यटन गन्तव्यहरू
इसाईहरूले सतावटको समयमा दोस्रो शताब्दी ईसाको वरिपरि कठिनाइको बीचमा प्रकोपहरूको उत्खनन गर्न थाले। उनीहरूले प्रयोग गरेको अवधिमा रोमका प्रकोपहरू केवल चिहानमा मात्र होइन तर पूजा गर्ने ठाउँ र एउटा ठाउँमा परिणत भए जहाँ उनीहरू आफ्नो विश्वासको अभ्यास गर्न सुरक्षित महसुस गर्थे।
इस्वी संवत्‌ 313१XNUMX मा मिलानको उर्दीको हस्ताक्षर भएपछि रोमी अधिकारीहरूले इसाईहरूमाथिको सतावटको अन्त्य भयो, ताकि उनीहरूले जग्गा कब्जा नगरी जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने बढी स्वतन्त्रता प्राप्त गरे र यसरी निर्माण गरियो। सानो चर्च जहाँ प्रार्थना गर्न। यसको बाबजुद, इसाई समुदायले Rome औं शताब्दीसम्म रोमको प्रकोपहरूलाई कब्रिस्तानको रूपमा प्रयोग गरिरहे।
शताब्दियौंपछि इटालीको बर्बर आक्रमणको दौडान रोमको प्रकोप निरन्तर लुटिएको थियो र क्रमिक पोपहरू दफनको चिह्नहरू शहरको चर्चहरूमा हस्तान्तरण गर्न बाध्य भए। यसैले, catacombs त्यागिएको थियो र लामो भूल।
मैले पोस्टको सुरुमा भनें, विगतमा त्यहाँ si० भन्दा बढी क्याटाकम्बहरू थिए तर तीमध्ये केवल today जना आज सार्वजनिक रूपमा खुला छन्। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रख्यात (सान क्यालिक्सो, सान सेबस्टियन र डोमिटिला) Via Appia मार्फत एक अर्काबाट केही दूरीमा अवस्थित छन्। र लाइनहरु ११118 र २१218 मा राम्रा सेवाहरु।
सेन्ट सेबास्टियनको क्याटाकम्ब (अप्पिया अन्टिका मार्फत, १ 136): १२ किलोमिटर लामो, यसको नाम इसाई धर्ममा परिणत भएकोमा शहीद भएको एक सैनिकको हो, सान सेबास्टिन। सान क्यालिस्टोको catacombs सँगै, तिनीहरू देख्न सकिन्छ कि सबै भन्दा राम्रो हो।
सोमबार देखि शनिबार बिहान :9: ०० बजे देखि बेलुका १२:०० बजेसम्म र बेलुका २:०० बिहान 00:०० बिहान देखि खुला रहन्छ।
सेन्ट क्यालिस्टोको क्याटाकम्ब्स (अपिया एन्टिका, १२126 मार्फत): सान क्यालिस्टोको बिरामीहरू २० किलोमिटरभन्दा लामो लामो ग्यालेरीहरूको सञ्जालमा १ 16 पप र दर्जनौं ईसाई शहीदहरूको चिहानस्थल थिए। बिहीबार देखि मंगलबार बिहान :20: ०० बजेदेखि बेलुका १२:०० बजे सम्म र बेलुका २:०० बिहान 9:०० बिहान सम्म खुल्ला हुन्छ।
प्रिस्किलाको Catacombs (सलारिया मार्फत, 430०): तिनीहरूमा कलाको इतिहासका लागि एकदम महत्त्वपूर्ण फ्रेस्कोहरू सुरक्षित गरिएको छ, जस्तै वर्जिन मरियमको पहिलो प्रतिनिधित्व। तिनीहरू म Tuesday्गलबारदेखि आइतवार बिहान :9: ०० देखि १२:०० बिहान र बेलुका २:०० बिहान 00:०० बिहान देखि हेर्न सकिन्छ।
Domitilla को catacombs (Via delle Sete Chiese, २280०): १ kilometers kilometers in मा १ 15 किलोमिटर भन्दा अधिक लम्बाइका यी प्रलयहरू पत्ता लागेका थिए र उनीहरूको नाम वेस्पासियनको नातीमा छ। बुधवार देखि सोमबारसम्म खुला: बिहान :1593: ०० देखि १२:०० बिहान र बेलुका २:०० बिहान 9:०० बिहान सम्म।
सान्ता एग्नेसको क्याटाकम्ब्स (नोमेन्टाना मार्फत, 349ia 9): उनीहरूको नाम सेन्ट एग्नेसको हो, जो उनको इसाई विश्वासको लागि शहीद भए र पछि उनलाई उनको नाम लिने यस्तै प्रहारमा दफन गरियो। तिनीहरू बिहान :00: ०० देखि १२:०० बिहान र बेलुका :12:०० बिहान 00:०० बिहान देखि हेर्न सकिन्छ। तिनीहरू आइतबार बिहान र सोमबार दिउँसो बन्द छन्।
सजावट र catacombs को आइकनोग्राफी
छवि | भर्जिन मेरी फोरमहरू
दुबै रोमको क्याटाकम्बसको सजावट र यसको चित्रण समयको क्रममा विकसित भयो। सुरुमा उनीहरूले ग्रीसबाट जनावर वा वनस्पति संसारमा सम्बन्धित विषयवस्तुहरूसहित एउटा रहस्यमय पृष्ठभूमिसँग ठूलो प्रभाव पारे: ढुकुर (पवित्र आत्मा), दाख र गहुँ (Eucharist), मयूर (सदाको लागि), माछा (बप्तिस्माको संस्कार), आदि।
पछि, तेस्रो शताब्दी ईस्वीतिर, बाइबलीय विषयहरू देखा पर्‍यो जसमा ख्रीष्टलाई असल गोठालो वा शिक्षकको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिएको छ।
पुरातत्वविद्हरूले रोमको प्रकोपको मिति तय गर्न सकेका छन् किनकि पर्खालहरूमा सिक्का वा क्याओस फिक्स गर्ने प्रचलनले गर्दा उक्त व्यक्ति कुन सम्राटको मृत्युभएको थियो भनेर जान्न सम्भव भयो। उदाहरण को लागी, केहि सिक्का मा डोमिशियन र नीरो वा Vespasian को पुतली बोक्छ।
रोमको प्रकोपमा के हेर्ने?
रोमको प्रकोपको भ्रमणले हामीलाई उनीहरूको खेदो गरिएको समयमा क्रिश्चियन दफनहरू कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुराको बारेमा जान्न अनुमति दिनेछ। यो नम कोरिडोरहरूमा हिंड्न र शताब्दीयौं अघि बनाइएको केही चिहानहरूको मजाका चिहानहरूको चिन्तन गर्न धेरै उत्साहजनक छ।
जिज्ञासाको रूपमा, त्यस समयको उच्च शिशु मृत्युदरको कारण, रोमको प्रकोपमा हामी बच्चाहरूको लागि ठूलो संख्यामा साथै सम्पूर्ण परिवारहरू गाड्न ठूलो चिहानहरू देख्न सक्छौं।
रोमको catacombs मा टिकटको मूल्य
वयस्क:eयूरो
१ 15 बर्ष मुनिका:eयूरो
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » रोम » रोमको प्रकोप
भोलेन्डम शहरमा के हेर्ने